INDLELA YOKUSETYENZISWA KWEENTSIMBI
ISETYHULA YABONA AMABANGELA
Eyona intsimbi for zeplastiki ngenaliti izixhobo tooling
Iinjineli zinokuninzi kwezinto ekufuneka ziqwalaselwe xa zisebenza kwiplastikhi yenaliti yeplastiki yeprojekthi. Ngelixa zininzi ii-resin ze-thermoforming ongakhetha kuzo, kufuneka kwenziwe isigqibo malunga nesona sinyithi silungileyo sokusisebenzisa isixhobo sokubumba ngenaliti. Uhlobo s ...
Isixhobo sesinyithi se-D2
Intsimbi ye-D2 sisixhobo somoya esicinyiwe, esinekhabhoni ephezulu, nesinyithi esinechromium. Inokumelana nokunxiba okuphezulu kunye neempawu ezichasene nokunxiba. Emva unyango ubushushu, yobulukhuni unako ukufikelela kuluhlu 55-62HRC, kwaye ingaqhubekeka kwi annealed state.D2 intsimbi phantse n ...
Ungasikhetha njani isixhobo sentsimbi sokwenza ubumba
Iimfuno ngokubanzi zezixhobo zentsimbi Ubulukhuni kunye nokunxiba ukunganyamezeli kunye nobukhali zizinto ezimbini ezibaluleke kakhulu xa ukhetha isixhobo esenziwe ngentsimbi. Kuba ezi mpawu zihlala zichasana, xa ukhetha ukungalungelelani kuhlala kufuneka kwenziwe. Sithi aba...
Isantya esenziwe ngentsimbi: sisebenza ngakumbi kwaye siyathandwa
Ngokwemithombo yemizi-mveliso, imarike yehlabathi yezixhobo zokusika isantya esiphezulu (HSS) kulindeleke ukuba ikhule ngaphezulu kwe-10 yezigidigidi ngo-2020. UJackie Wang-General Manager weShanghai Histar Metal, ujonga ukuba kutheni i-HSS ihlala iyindlela ethandwayo, eyahlukileyo Ukuqanjwa ...
IZICELO ZESIXHOBO SESIXHOBO Yintoni Isixhobo Sesinyithi?
Yintoni Isixhobo Sesinyithi? Isixhobo sesinyithi luhlobo lwentsimbi ye-carbon alloy ehambelana kakuhle nezixhobo zokuvelisa, ezinje ngezixhobo zesandla okanye umatshini uyafa. Ubulukhuni bayo, ukuxhathisa kwe-abrasion kunye nokukwazi ukugcina ubume kumaqondo obushushu anyukayo zezona zinto ziphambili zalo mbandela. Isixhobo sensimbi siqhelekile ...
Ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezilahlwayo kuxhasa amaxabiso ama-rebar aseYurophu
Ukunyuka kweendleko zezinto ezilahliweyo kuxhasa amaxabiso ama-rebar aseYurophu Okuthobekileyo, ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezilahliweyo kwamiliselwa ngabavelisi be-rebar kumazwe aseNtshona yeYurophu, kule nyanga. Ukusetyenziswa kweshishini lokwakha kuhlala kusempilweni. Nangona kunjalo, ukunqongophala kwe-v-enkulu ...
Amaxabiso eNsimbi yaseYurophu afumana kwakhona njengoTyikityo lokuNgenisa ngaphakathi licothisa abathengi baseYurophu bemveliso yamatye okusila ngokuthe ngcembe baqale ukwamkela ukunyuka kwamaxabiso okusila, phakathi / ngasekupheleni kukaDisemba 2019. Ukugqitywa kwenqanaba lokuthotywa ixesha elide kukhokelele kuphuculo ...
Ukuvuselelwa kwintengiso yentsimbi yaseTshayina kuyaqhubeka, phakathi kwemizabalazo yehlabathi Ubhubhane we-coronavirus wenze umonakalo kwiimarike zentsimbi nakwezoqoqosho kwihlabathi liphela, kwiinyanga ezintandathu zokuqala zika-2020.
Eyona intsimbi for ziphene zeplastiki sokubumbela ...
Indlela ukukhetha isixhobo sentsimbi sokubumbela-ma ...
IZICELO ZESIXHOBO SESIXHOBO ...
Isixhobo seFlat yeBar Flat, A8 / 1.2361 Chipper Iimela, Isantya esiphakamileyo seBha yentsimbi, Sheet Stainless, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo Bar, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo,